I-Xiaomi Mi 8 Pro: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
UXiaomi uzise iifowuni ezimbini ezintsha namhlanje, nge-19 kaSeptemba. Enye yeemodeli ezimbini ezinikezelwe namhlanje yiXiaomi Mi 8 Pro, Inguqulelo efana ncam naleyo yesiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina. Njengokuba ibisandula ukuvuza, yifowuni yokuqala evela kumenzi othandwayo ukuba inzwa yeminwe idityaniswe kwiscreen sayo. Yeyona nto iphambili kwesi sixhobo.
Kwinqanaba lobugcisa, iXiaomi Mi 8 Pro yifowuni elungileyo. Yimodeli enamandla, eneprosesa elungileyo, kwaye enezinto zonke ezifanayo neMi 8 yenkampani eboniswe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ke lukhetho olutsha kwabo bafuna imodeli ephezulu kwisikhathalogu sabo.
Uyilo luyafana noko sikubonile kwi-Mi 8 Lite ekhe yaziswa kulo msitho. Sijongene nemodeli ene isikrini esineefreyimu ezincinci kakhulu, kwaye ngaphandle kobukho benotshi. Into ngokuqinisekileyo evuyisa uninzi lwabo banokuba nomdla kule fowuni.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Pro
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Pro
Njengoko sikuxelele, ukubalulwa kwayo kunemiba emininzi efanayo neMi 8 eboniswe ekupheleni kukaMeyi. Ifemi kubonakala ngathi ilandele isicwangciso esifana neso se-OnePlus, ibonisa imodeli yinguqulelo etshintshiweyo ephezulu. Oku kukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Pro:
Isikrini: 6,26-intshi Super AMOLED ngesisombululo 2248 x 1080 pixels kunye 18: 9 ratio
Inkqubo : I-Qualcomm Snapdragon 845 octa-core ene-4 x 75 GHz Cortex A2.8 kunye ne-4 x 55 GHz Cortex A1.8
I-RAM: 6GB kunye ne-8GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 128 GB
Ikhamera esemva: I-12 + 12 MP ene-f / 1.8 kunye ne-f / 2.4 kunye ne-LED
Ukuxhuma: 4G / LTE, Dual SIM, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11a / b / g / n / ac ...
Ibhetri: 3.400 mAh nge-QuickCharge 4.0 + ngokukhawuleza
abanye: Isenzwa zeminwe zeminwe phantsi kwescreen se-USB Type-C
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.1 Oreo ene-MIUI 9.5 umaleko wokwenza ngokwezifiso (Hlaziya kwi-MIUI 10 ecwangcisiweyo)
Njengokuba ubona, Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8 Pro akubonisi mangaliso. Isiphelo esiphakamileyo esingafaniyo nesenzwa yeminwe phantsi kwescreen esitsha, ayitshintshi nantoni na ngokubhekisele kwisiphelo sangaphambili. Kuyamangalisa ukuba uphawu lwaseTshayina lukhethe esi sicwangciso, kodwa sinokusebenza kakuhle.
Njengakwimodeli enye yenkampani, le Xiaomi Mi 8 Pro izokwaziswa e China, kodwa akukho kwaziwa malunga nokukhululwa okunokwenzeka kwilizwe jikelele. Ayinakuba yinto engaqhelekanga ukuba ifowuni ivule, kodwa kungathatha ixesha. Ngokukodwa ukuba sithathela ingqalelo yonke into ekufuneka ilindile ukuba i-Mi 8 ifike kwintengiso.
Kuya kubakho iinguqulelo ezimbini zokuphela okuphezulu, kuxhomekeke kwi-RAM yakho kunye nokugcinwa kwangaphakathi. La ngamaxabiso abo wentengiso e China:
Inguqulelo ye-6/128 GB: I-3199 yuan (malunga nama-euro angama-400 ukutshintsha)
Inguqulelo ene8 / 128 GB: 3599 yuan (malunga nama-450 eeuros zokutshintsha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Xiaomi Mi 8 Pro: Imodeli entsha enenzwa yeminwe edityaniswe kwiscreen